» “सर्वोच्च,को गेटमै, दिनेश त्रिपाठी,को कठालो, समातियो ! “सर्वोच्च,को गेटमै, दिनेश त्रिपाठी,को कठालो, समातियो ! – हाम्रो खबर
“सर्वोच्च,को गेटमै, दिनेश त्रिपाठी,को कठालो, समातियो !
“प्रधाानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनामा मागेर आन्दोलनरत वकिलहरु उग्र बन्दै गएका छन् ।”
“लामो समय देखी शान्तीपुर्ण आन्दोलन गरेर राजिनामा माग्दा समेत जबरा टसमस नभए पछि बारले थप आक्रा मक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न थालेको छ । आज राणालाई अदालतनै छिर्न नदिने भनेर आएका वकिलहरु यति खेर सर्वोच्चको गेटमा धर्नामा बसेका छन् ।”
“निकै ठूलो संख्यामा आएका वकिलहरु र प्रहरी विच केहि बेर अघि सर्वोच्चको गेटमा धकेलाधकेल समेत भएको छ । सो क्रममा चोलेन्द्रको राजिनामा मागेर उधुम मच्चाउँने मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको कठालो समातिएको खबर छ ।”
“धकेकाधकेलीमा कुन पक्षले हो भन्ने ठेगान छैन तर त्रिपाठीको कठालो समातिएको खबर प्राप्त भएको छ । हुलमुलमा कसले समातेको हो भन्ने खुलेको छैन । राणालाई अदालत प्रवेश गर्न नदिने भनेर वकिलहरु धर्ना बसे पनि प्रधानन्यायाधिश राणा भने उनिहरुलाई छक्काउँदै आफ्नो कुर्सीमा पुगिसेकेका छन् ।”
“कानुन व्यवसायीको जुलुसमा झडप हुने स्थिति आउँदै केही वकिलहरू पक्राउ परेका छन् । आन्दोलनरत पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुबीच केहीबेर धकेलाधकेल भएपछि झडपको स्थिति सृजना भएको थियो।”
“सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई सर्वोच्‍च अदालत प्रवेशमा रोक लगाएको छ। बारको टोली सर्वोच्‍च अदालत जाने कार्यक्रम रहे पनि गेट बन्द गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । केहीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।””